Puntland oo ka Digaysa Khalkhalgelinta Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya.[ War-saxaafadeed]
September 8, 2012 - Written by Dowladda Puntland waxay si weyn uga digaysa dhaqanada ku salaysayn khalkhalgelinta, musuqmaasuqa, iyo handadaada maalmahaan ugu dambeeya ka socda habka doorashada Madaxweynaha Soomaaliya. Dowladda Puntland waxay door weyn ka ciyaartay hirgalinta Barnaamijka Roadmap-ke ee Dhamaystirka Xilliga KMG ah, iyadoo Puntland ku qabatay magaalada Garoowe Shirarkii Qaran ee Dastuurka iyo iyadoo door muhiim ah ka qaadatay Shirarkii Saxiixayaasha ee lagu qabtay magaaloyinka Gaalkacyo, Addis Ababa iyo Nairobi.
• 4 July 2012, Puntland waxay taageertay dhisitaanka iyo dhamaystirka Maamullada Federaalka,sida ku cad Dastuurka Federaalka Soomaaliya;
• 26 August 2012, Puntland waxay ka digtay faragelinta joogtada ah ee qaabka xulitaanka Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka; sidoo kale, Puntland waxay magacawday Guddiga Arrim aha Federaalka oo dabagala arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka Federaalka;
Halkaan ka Akhriso warsaxaafeedkii ka soo baxay dowllada Puntlland
Office: +252 90 — 794312 / 794040 /
790999 / 794597 / 799128